Hevitra MPANOHARIANA | Oktobra 2008 |
Fahendrena fa tsy fahalalana no antoky ny Fitsarana
2008-10-25 @ 19:51 in Andavanandro
Be tamin'ireo nanaraka ny fitsarana ilay tovolahy nanana ny lazany tamin'ny setrasetra sy ny ditran'i Bad Boy tao Antsirabe ka nahafatesany olona mihitsy aza no tsy faly tamin'ilay didim-pitsarana navoaka. 20 volana sazy mihatra fotsiny sy onitra madinidinika, nefa tsy vao sambany ilay boay io no nandratra olona fa efa fanaony mihitsy sady afaka madiodio hatrany tamin'ny ditra nataony teo aloha rehefa niatrika fitsarana. Sambany izy tamin'ity indray mitoraka ity mba nahazo sazy mihatra. Efa nahemotra hatrany ny fotoam-pitsarana saingy rehefa tsapa fa tsy mihemotra hahalala izay didim-pitsarana ny maro dia notontosaina tsy fidiny ihany ilay fitsarana. Dia io no vokany. Mba rangitra koa izahay na dia aty amin'ny faritra hafa aty aza no mipetraka ary miahiahy fa misy fanaovana kolikoly ao na fahalalana olona mahatonga azy ho Tsimatimanota ka hirehareha mandrakariva.
Amin'ny lafiny ilany anefa toa tsy gaga indray amin'ilay toe-draharaha. Tamin'ny vanim-potoana taloha dia ny mpanjaka na ny tendriny no misahana izany raharaham-pitsarana izany. Tamin'ny ankapobeny ny olona napetraky ny mpitsara hisahana izany andraikitra izany dia olona mahay manadihady sy mamakafaka ny zavamisy na izay mety ho fizotrany tokoa. Misy fivoarany mandrakariva anefa ny olombelona. Tsy mivoatra ho tsara matetika fa mirona ho amin'ny fitongilanana. Na mba manapetra ihany koa ny olombelona fa tsy ary mahalala ny tokony ho rariny. Mety hisy ny sazy mifandaka tanteraka amin'ny heloka mitovy. Mety ho mati-kena-maso ihany manko ny mpitsara raha olona akaiky azy ny iray amin'ireo andaniny sy ankilany eo amin'ny raharaha iray. Tsy maintsy miaraka amin'ny fitsarana noho izany ny lalàna, ny fitsipika ary ny didy mba ho sazy mitovy na mifanahantsahana no ampiharina amin'ny heloka iray.
Nisy ihany koa ny fitsarana tamin'ny alalan'ny poizina zavamaniry (tangena) rehefa tsy hita intsony
izay tena marina sy diso amin'ny raharaha kanefa matetika araka ny tolo-bola ambadika ihany koa dia mety ho mahery na matsatso izany poizina sotroina izany. Amin'io fotoana io dia tsy araka ny fandehan'ny raharaha intsony no itsarana ny olona fa iantsoana ny hery hafa heverina ho ambony mba hamaly araka ny nataon'ny tsirairay ny herin'ny poizina. Karazandrazan'ny miakina amin'ny vintana sy ny tanjaky ny hery fiarovana ao amin'ny tsirairay ihany noho izany ity fomba fitsarana ity. Tsy dia idirantsika lalina loatra ny amin'ity tangena ity satria tsy misy mampihatra loatra intsony tsinona.
Fa nivoatra tsikelikely ny fomba fitsarana. Efa mipetraka ny lalàna koa dia manodidina ny lalàna sy ny fampiharana azy no tena nimasoana. Nilana fianarana manokana ny fahalalana izany lalàna izany. Manana ny manampahaizana manokana momba azy ny lalàna ka ireny olona ireny no heverina ho mendrika ny hisahana ny raharaham-pitsarana. Lasa asam-boninahitra ny misahana ny raharaham-pitsarana, tsiriritin'ny maro na mahantra na manankarena izany asa izany. Tsy dia misy loatra ny lafy ratsiny amin'izay toe-draharaha izay ankoatra ny fitadiavan'ny sasany hahazo izany asam-boninahitra izany amin'ny fomba rehetra, eny fa na dia ividianam-bola ny diplaoma manamarika izany aza.
Ny diplaoma azo tamin'ny kolikoly anefa tsy mijanona hatreo, mitady fitadiavan-tombotsoa ankoatra izay omen'ny fanjakana izany. Matoa koa notsiriritina ilay toeram-boninahitra heverina ho mifanaraka amin'izany ihany koa ny fidiram-bola tafahoatra aza. Manomboka eo ny ranomodin'ny tsy rariny. Ny herin'ny vola no manjaka. Ny fandio iray siny tokoa tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka. Tsy fantatra intsony ankehitriny izay ao amin'ny fandio sy ao amin'ny fandoto fa mihevitra ny maro fa be loatra ny tsy rariny avoakan'ny fitsarana... Tsy dia ataony mahagaga intsony raha misy ny mpanao ratsy afaka mandrakariva satria raha misy ny fitsarana diso dia tsy meloka ny amin'izany ny mpitsara fa ny fitsarana fotsiny no akarina ho amin'ny dingana ambony kokoa.
Eritreritra tsy tana ny ahy, eny fa na dia io heverina ho tantaran'ny fitsarana amin'ny ankapobeny io aza. Mba hitandroana ny rariny, tsy mba misy ve ny fanaraha-maso ireo mpamoaka ny didim-pitsarana ireo? mampanao ho sazy mihantona ny tokony ho asa anterivozona na tokony famonoana ho faty mihitsy aza! maninona raha arahi-maso tsirairay ny mpitsara? Jerena avokoa ny didim-pitsarana navoakany nandritra ny fe-potoana voafaritra ahitana izay nataony! sa tena tsy azo tanterahina mihitsy ny tahaka izany?
Fa raha sarotra ny manatanteraka izany eritreritro izany, maninona moa raha tsy maintsy ampitaina ho fantatry ny rehetra ny anaran'ireo mpitsara misahana ireny raharaha mafampana ireny ho fantatry ny be sy ny maro? Amin'izay fotoana izay ho fanta-bahoaka ho azy ireo mpanao fitsarana miangatra tsy mahalala afa-tsy ny herin'ny vola sy ny fahalalana olona akaiky. Amin'izay fotoana izay tsy ny Fitsarana amin'ny ankapobeny intsony no ho afa-baraka fa izay minia manao fitsarana diso matetika. Mba ho faly na ho kivy mialoha ihany koa izay miatrika ny fitsarana ataon'ireny karazan'olona ireny.